Bilaogera Asongadina: Ahmed Awadalla · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2019 4:07 GMT
Iray amin'ireo nahazo vatsy avy amin'ny Rising Voices ny tetikasa “Exploring Taboos (Firesahana ny Fady)”, nokarakarain'ny ekipa Nazra tao Kairo. Ny tanjon'ny tetikasa dia ny hanome toerana azo antoka ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy ao Ejypta mba hiresaka momba ny olana toy ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, ny fitoviana ara-nofo, ny famorana ny vehivavy ary ireo lohahevitra fady hafa.
Efa nitatitra momba ireo atrikasa voalohany sy ny lahatsoratra bilaogy voalohany momba ny tetikasa firesahana fady izahay.
Nandray anjara tamin'ny atrikasa voalohan'ny tetikasa “Exploring Taboos” i Ahmed Awadalla. Mpampiofana sy mpampianatra ao amin'ny Fikambanan'ny Fampandrosoana sy ny Fandrindram-pianakaviana (CFPDA) izy. Niorina tamin'ny taona 1967, manome fanohanana ara-teknika, ara-pitantanana ary ara-pandaminana mikasika ny tolotra fandrindram-pianakaviana sy fanabeazana ara-pahasalamana ho an'ireo fikambanana 34 mpikambana ao Ejypta ity fikambanana ity.
Vao haingana izahay no niresaka tamin'i Ahmed ary nanazava momba ny asany izy:
Mitantana fandaharan'asa ho an'ny tanora aho amin'izao fotoana izao izay mikendry ny hampitombo ny fahafantarana ny fahasalamana ara-pananahana sy ny olana ara-nofo eo amin'ny tanora Ejiptiana. Tena tiako ny asako satria tena liana amin'ny fifandraisana eo amin”ny zo ara-pahasalamana, ara-nofo sy ny zon'olombelona aho. Asa misy fanamby izany, satria mahatonga ny asa ho sarotra kokoa ny fitomboan'ny fandalàna ny nentin-drazana eto Ejipta ka mihasarotra kokoa ny miasa any amin'ireo sehatra mifandraika amin'ny firaisana ara-nofo. Na eo aza ny tsikera, dia tiako ny asako sy ny miara-miasa amin'ny tanora.
RV: Ahoana no nahafantaranao ny vondrona Nazra sy ny tetikasa Exploring Taboos?
Ahmed: Tamin'ny alalan'ny tambajotram-pifandraisana tao amin'ny Facebook no nahafantarako momba ny atrikasa firesahana momba ny fady. Nampientanentana ahy ny nandeha namantatra hoe manao ahoana ny fampiofanana, ary ny olona ao ambadiky ny atrikasa sy ny fomba famakivakiana ny fady. Nahaliana ahy koa ny hahafantatra hoe olona manao ahoana no hiseho amin'ny hetsika toy izany, satria tsy fahita matetika ny manana atrikasa hiresahana momba ny fady.
RV: Lazalazao azafady ny zavatra tsapanao momba ny fiofanana. Ahoana ny fihetsiky ny mpandray anjara? Nanangana bilaogy ve izy ireo?
Ahmed: Nahafinaritra ahy tokoa ny fampiofanana; tsy dia be pitsony ary nahatonga ahy tena nifankazatra tamin'ny rehetra. Malina ny fisafidianana ny mpampiofana. Nahafinaritra ny fifaneraserana teo aminay rehetra.
Faly aho momba ny valin'ny atrikasa hatreto. Nanomboka ny bilaoginy daholo ireo mpandray anjara rehetra. Ny sasany amin'izy ireo manokana, ny hafa somary ofisialy, saingy tena mahaliana ny mamaky ireo lohahevitra samihafa nosoratan'izy ireo.
RV: Efa nibilaogy ve ianao taloha? Ahoana no fahitanao ny famahanana bilaogy any Ejipta?
Ahmed: Efa nanandrana nibilaogy aho teo aloha. Zavatra lehibe izany. Mahatsiaro fomba fiteny iray mahatsikaiky henoko avy amin'ny mpikatroka media sosialy momba izany aho; “Mibilaogy aho, noho izany, misy aho.” Tena tiako ny manoratra sy ny fanehoako ny hevitro. Mitady hanadino ny maha zava-dehibe ny fanehoan-tena ny olona eto Ejipta noho ny famoretana an-taonany maro nolalovanay. Na izany aza, manomboka rava tsikelikely izany famoretana izany.
RV: Ahoana no fahitanao ny Twitter sy Facebook amin'ny maha fitaovana ho an'ny fikatrohana sosialy azy ireo?
Manana anjara toerana tena lehibe amin'ny fikatrohana sosialy ny Facebook sy ny Twitter eto Ejypta. Amin'ny ampahany dia noho ny tsy fisian'ny fahalalahana eto amin'ny firenenay izany, ary ny fanorisorenana ataon'ny fanjakana amin'ireo mpikatroka, satria olona maro no mampiasa ny Facebook sy ny twitter ho sehatra iray hanehoana hevitra sy hiarovana zavatra samihafa, indrindra ny tanora. Na dia mahafinaritra aza ny manana olona maro milaza ny olan'izy ireo dia tsapako fa tsy maintsy entina eny an-dalambe ny fikatrohana ara-tsosialy mba hisian'ny tena fiovana ara-tsosialy.
RV: Mibilaogy amin'ny teny anglisy ianao fa tsy amin'ny teny Arabo. Olana amin'ny bilaogy ve ny fiteny?
Olana iray manahirana ahy ny fiteny isaky ny hoe hibilaogy aho. Te hanoratra amin'ny fiteny Arabo aho mba hahazoana mpamaky ao amin'ny fireneko. Nanapa-kevitra ny hanoratra amin'ny teny anglisy aho satria fiteny iraisan'ny rehetra izany ka afaka mifandray amin'ny mpihaino manerantany aho ary mba handrenesana ny feoko any ivelan'ny faritry ny fireneko. Manantena ihany koa aho fa hanomboka bilaogy amin'ny teny Arabo tsy ho ela.
RV: Ahoana no nahatongavanao tamin'ny lohatenin'ny bilaogy hoe ”Rebel with a cause”?
Nalaina tamin'ilay sarimihetsika malaza an'i James Dean “Rebel without a cause” (mikomy tsy misy fotokevitra)”, miaraka amin'ny fanovana kely ny anaran'ny bilaogiko. Mazava fa nahatsapa ho mpikomy eo anivon'ny fiarahamonina aho. Miezaka mifanaraka amin'ny hafa sy izay antenain'izy ireo avy amin'izy ireo ny ankamaroan'ny olona any Ejipta. Nisafidy ny handeha amin'ny lalana nofidiko ho an'ny tenako eo amin'ny lafiny manokana sy arak'asa aho. Izany no nahatonga ahy nieritreritra ny tenako ho mpikomy. Mihevitra ihany koa aho fa manana antony manosika ahy hanaraka ity lalana ity ho toy ny fahamarinana sy ny fanajana ny olona rehetra aho.
RV: Na dia noraràna tany Ejipta aza ny Famorana Vehivavy (FGM amin'ny teny anglisy) tamin'ny taona 2008, dia mbola ampiharina ihany izany. Ampy ve ny fampahafantarana nataon'ny fanjakana tamin'ny vahoaka? Ahoana no fahitanao fa afaka mamaha ity olana ity sy mitondra fanovana ny mpikatroka Nazra?
Iray amin'ireo olana goavana eo anivon'ny fiarahamoninay ny FGM. Mampiseho ny antontanisa fa mbola mihanaka izany na dia eo aza ny fanamelohana izany tamin'ny taona 2008. Nijery ny olana ny governemanta ary misy ny finiavana ara-politika hanafoana ity fomba fanao ity. Manana fandaharan'asa hanafoana ny FGM amin'ny fiarahamiasa amin'ny ONG eo an-toerana ny governemanta. Somary mihena ihany anefa ny fomba fanao, saingy mbola mila ezaka sy fanoloran-tena bebe kokoa mba hialana amin'izany ary mampianatra ny olona ao amin'ny vondrom-piarahamon'izy ireo momba ny voka-dratsin'ny FGM.
Mihevitra aho fa ny azon'ny Nazra sy ny mpikatroka hafa atao mba hiadiana amin'ny FGM dia ny fanohizana ny fanerena ny governemanta mba hitoeran'izany ho laharam-pahamehana hatrany amin'ny fandaharan'asa fanavaozana. Ny zava-dehibe kokoa anefa dia heveriko fa manan-danja ny mampandray anjara ny vondrom-piarahamonina. Tokony hieritreritra foana momba ny fomba hahazoana ny hafatr'izy ireo manerana ny vondrom-piarahamonna sy hampandray anjara azy ireo amin'ny adihevitra ny mpikatroka.
RV: Afaka miresaka tsara momba ny fady, izay sarotra resahana mivantana amin'ny fenitra ara-tsosialy ve ny aterineto?
Mino aho fa azo ampiasaina hiresahana olana isan-karazany ny aterineto; indrindra ny fady ara-tsosialy satria mety hampidi-doza ny olona sasany ny miresaka azy ireo mivantana. Na izany aza, tena voafetra ho an'ny olona manana fidirana amin'ny aterineto sy ny nahavita fianarana ambony ny tontolon'ny fikatrohana amin'ny aterineto. Mbola maro ireo fady misy (toy ny fivavahana sy ny fananahana) ary tokony resahana amin'ny sehatra rehetra eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy mitsaha-mitombo ampiasana amin'ny hetsika ara-politika sy ara-tsosialy ny aterineto, na izany aza, mijanona ho tsy raharahiana tanteraka ny olana momba ny fananahana.
RV: Inona avy ireo fanamby atrehan'ireo mpikatroka ankehitriny ao Ejypta? Ahoana no fahitan'ny fiarahamonina momba azy ireo?
Tena sarotra ho an'ireo mpikatroka eto izany. Iharan'ny fanagadrana fahatany, sy ny fampijaliana, sns ireo mpikatroka. Indrindra ireo izay mitsikera ny andrim-panjakana ara-politika sy ara-pivavahana. Ankoatra izay, dia mety hiharan'ny sivana sy ny fihomehezana izy ireo indrindra rehefa miaro ireo olana izay tsy mifanaraka tsara amin'ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao eo an-toerana. Mpandala ny nentin-drazana ny vondrom-piarahamonina eto ery tsy resahana mivantana matetika ny olana momba ny fananahana.
Mitsipaka ny fanabeazana momba ny fananahana ny ankamaroan'ny olona eto noho ny fiheveran-diso fa mampiroborobo ny “fitondran-tena ratsy sy tsy mendrika” izany, na manilika izany koa ho toy ny olana tsy misy dikany ary manoro hevitra antsika hifantoka amin'ny “olana lehibe kokoa” ka manasarotra ny fahazoana fanohanana bebe kokoa ho an'ny fandaharan'asa ara-panabeazana momba ny fahasalamana ara-pananahana; na dia sehatra sarotra miantraika amin'ny olona eo amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny fiainany aza izany ary tena mahazatra ihany koa ny tsy fahampian'ny fahalalana na hevi-diso momba izany .
Natao tamin'ny mailaka ny tafatafa